An Open Letter to Burmese Buddhists Concerning the Rohingya | Rohingyas Genocide
Home › Media › International › An Open Letter to Burmese Buddhists Concerning the Rohingya
Rohingya Refugees crossing the Naf River with country boat with fear – Arakan TV
Rohingya Refugees marching towards Refugee camps. Photo – Siti Aisyah’s post
We have struggled to reconcile these events as adults, when as children we were taught to pay respects to monks at Buddhist monasteries, memorize Pali Suttas, and made to feel that Theravada Buddhism was intrinsic to Burmese culture. Yet, now it seems like the Burmese public’s widespread attitudes towards the Rohingya directly contradict the teachings of Lord Gautama Buddha.We were always taught that Buddhism isareligion based onadesire to end suffering. Throughout his many lifetimes, Buddha saw the ways in which all beings suffered – sometimes from the nature of life and other times from religious and cultural systems that devalued certain groups of people. His teachings promote critical thinking, compassion, and striving to make ourselves and the world around us better. He warned against the dangers of attachment – to one’s race, religion, and nation – as these attachments prevent us from seeing the four noble truths and following the eightfold path.
For press inquiries and questions on how you can help, please contact Saddha: Buddhists for Peace at saddha.bfp@gmail.com.
Source : https://www.transcend.org/tms/2018/04/an-open-letter-to-burmese-buddhists-concerning-the-rohingya/
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိသားစုများမှ မွေးဖွားလာကြသော မြန်မာများဖြစ်သည့်အလျောက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကျပ်အတည်းကို သတိပြုမိကြပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ မှ စတင်၍ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုဝင် (၇) သိန်းခန့် ဒုက္ခသည်များ အဖြစ် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်ခဲ့ရ သည့်အပြင် ရခိုင်၊ မြို၊ သက် နှင့် ဒိုင်းနက် ဒုက္ခသည် (၃) သောင်းခန့် စစ်ဘေးရှောင်ရင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တပ်မတော်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ လုံခြုံရေးတပ်များက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ အပေါ်တွင် တရားဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်မှုများ၊ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ ပြောင်းခိုင်းမှုများ၊ နေအိမ်များကို မီးရှို့ ခြင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် မုဒိန်းကျင့်မှုများကို ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်ဟု သတင်းပေးပို့မှုများကို ကြားသိရသောအခါ ကမ္ဘာတဝန်းက လူများနည်းတူ မိမိတို့အနေဖြင့် များစွာတုန်လှုပ်အံ့အားသင့်မိပါသည်။ ထိုသို့ ကျုးလွန်ရာတွင် ရိုဟင်ဂျာ ကလေးငယ်နှင့် မွေးကင်းစ ကလေးများကို ပါမချန် နိုပ်စက်ညှင်းပန်းပြီး သတ်ဖြတ်မှုများပါဝင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာများ အရ သိရှိရပါသည်။ ပို၍ အံ့အားသင့်ရသည့်အချက်မှာ ယခင်က တရားမျှတမှုအတွက် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသော လေးစားထိုက်သော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၊ သံဃာတော်များ၊ နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေး လှုပ်ရှားသူများသည် တချိန်က ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် ခါးခါးသည်းသည်း ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသော လုံခြုံရေးတပ်များ၏ တရားဥပဒေမဲ့ လူမဆန်စွာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို အပြစ်မြင်ခြင်း မရှိဘဲ အကာအကွယ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းတို့ကို တွေ့ ရှိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ အနေဖြင့် မတူညီသော မိဘ အသိုင်းအဝန်းများကြားမှ မွေးဖွားလာကြသော်လည်း ဤ ကြေငြာစာတမ်းကို တညီတညွတ်တည်း ရေးသားပါသည်။ မိမိတို့တွင်းမှ တချို့ ၏ မိဘများသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နုိုင်ငံရေးဖိနိုပ်မှုများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ဒုက္ခသည်များ၊ သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူများ အဖြစ် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ရောက်ရှိလာကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အာဏာရှင်စနစ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို မခံရဘဲ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့် ရှိသော နိုင်ငံတခုတွင် မိမိတို့၏ သားသမီးများကို ကြီးပြင်းစေလိုသော အိပ်မက်များ ရှိခဲ့ကြသည်။ အချို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြီးပြင်းသော်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ယူရန် ရွေးချယ်ခဲ့သူများ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာဖူးသူများ ဖြစ်ကြပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဘာသာလူမျိုးစည်းမခြားသော ခင်မင်ရင်နှီးမှုများ တည်ဆောက်ဖူးသူများ ဖြစ်ကြသည်။
မိမိတို့မှ တချို့ မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နိုင်ငံသားခံယူထားကြသူများဖြစ်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသော ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်လာသော ဒုက္ခသည်များ၊ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အခွင့်အရေး တောင်းဆိုကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ တချို့ လည်း မြန်မာနို်င်ငံသို့ ပြန်လိုကြပြီး မိမိတုို့ကို ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော လူမှု အသုိုင်းအဝန်းကို ပြန်လည် လုပ်ကျွေးပြုစုလိုသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မြန်မာလူ့အဖွဲ့ အစည်းမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခများစွာ ခံစားခဲ့ရပြီး ယခု အထိလည်း ခံစားနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ဘာသာစည်း လူမျိုးစည်းများကို ကျော်လွန်ကာ စစ်အာဏာရှင်အောက်တွင် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူများနှင့် တသားတည်းခံစားခဲ့ရပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသည့် အချိန်များတွင် သူမ၏ ဦးဆောင်မှုအား များစွာမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်အရေးတော်ပုံ ကာလအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့  လမ်းမများထက်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြသော ရဟန်းသံဃာတော်များကို လုံထိန်းများက လူမဆန်စွာ စော်ကား ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခဲမှုကို ဗီဒီယိုဖိုင်များမှတဆင့် ကြည့်ရှုရပြီး များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့ကျုးလွန်ခဲ့ကြသော တပ်မတော်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော လုံခြုံရေးတပ်များသည် ရခိုင်အကြပ်အတည်း အတွင်း လူသားခြင်းမစာနာသော တရားဥပဒေမဲ့ ရက်စက်မှုများကို ထပ်မံကျုးလွန်ကြပြန်သောအခါ ၎င်းတို့လုပ်ရပ်များ ကို ထောက်ခံအား ပေးသူများရှိနေသည်ကို များစွာစိတ်ပျက်မိပါသည်။
မိမိတို့သည်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနိုင်ရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှ ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အပေါ် ယုံကြည်အားထားခဲ့ကြပါသည်။ သုို့သော်လည်း သူမနှင့် NLD အစိုးရတို့သည် ကုလသမဂ္ဂမှ လူမျိုး သုတ်သင် ရှင်းလင်းမှု၏ အကောင်းဆုံးဥပမာ တခုဟုလည်းကောင်း၊ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု မြောက်သောလုပ်ရပ်များ ဟုလည်းကောင်း ဖွင့်ဆိုဖော်ပြရသော လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများအပေါ် ကျူးလွန်မှုများကို တားဆီး ဟန့်တားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အချို့သောဘုန်းတော်ကြီးများကလည်း နုိုင်ငံအတွင်း ရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်မှုအား ပျံ့ နှံ့ စေရန် တ်ဖက်တလမ်းမှ ပံ့ပိုးခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် သြဇာကြီးမားသော ဘုန်းတော်ကြီးတပါး ဖြစ်သော သီတဂူဆရာတော်သည် ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလတွင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ တပ်မတော်သားများကို ဟောခဲ့သောတရားတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူများသည် လူမပီသဘဲ နို်မ့်ကျသောသူများ ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်သော ရဟန်းများမှ ဘာသာပေါင်းစုံအရေး လှုပ်ရှားကြသူများနှင့် သတင်းထောက်များအား နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ရှိ အခြားသော မြန်မာပြည်ဖွားမွတ်စလင်တို့အား ဆန့်ကျင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကတည်းက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များကို လက်အုပ် ချီရှိခိုး ကန်တော့ရန်၊ ပါဠိ သုတ္တန်များကို ရွက်ဖတ်ရန် သွန်သင်ဆုံးမမှု ခံယူခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သော မိမိတို့အနေနှင့် ယခုဖြစ်ရပ်များကို နားလည်ရန် ခက်ခဲလျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးအများစု၏ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုဝင်များအပေါ်ထား ရှိသည့် သဘောထားသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများနှင့် အကြီးအကျယ် ကွဲပြားလျက် ရှိသည်ဟု မိမိတို့ အနေဖြင့် ခံစားရပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဦးတည်ရာပန်းတုိုင်သည် ဆင်းရဲခြင်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သည်ဟု သိရှိနားလည်ထားပါသည်။ ဘဝပေါင်းများစွာ ကျင်လည်ခဲ့ရာတွင် ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဓမ္မတာအလျောက် သတ္တ၀ါအပေါင်း ဒုက္ခဆင်းရဲ ခံခဲ့ရသည်များကို တွေ့ရှိတော်မူခဲ့သလို ဇာတ်ခွဲခြားသည့် ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေူးမှုဓလေ့ထုံးစံများကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲ ခံခဲ့ရသည်များကိုလည်း ကြုံတွေ့တော်မူခဲ့ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တရားတော်များသည် ကြင်နာသနားမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်မှုနှင့် မိမိနှင့် မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာမြေအား ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးပမ်းမှုတို့အား အခြေခံထားပါသည်။ အမျိုးဘာသာနှင့် နိုင်ငံအပေါ် စွဲလမ်းမှုတို့သည့် သစ္စာလေးပါးကို ဖုံးကွယ်စေ၍ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးလမ်းစဉ်မှ သွေဖည်စေပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကာကွယ်ရန်ဟု အကြောင်းပြကာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော မေတ္တာတရားနှင့် တရားဓမ္မတို့ကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပါက ဘာသာသာသနာကို ဖျက်စီးရာရောက်မည်သာဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကောလဟာလ ဖြန့်ဖြူးမှုများ၊ အမုန်းစကားဖြန့်ဖြူးမှုများ၊ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုဝင်များကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုမူခြင်း နှင့် ၄င်းတို့၏ အိမ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အမုန်းပွားခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တရားဓမ္မနှင့် ဆင့်ကျင်သွေ ဖယ်နေသည်ဟု နားလည်မိပါသည်။ ဤအပြုအမူများကို် ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကာကွယ်ရန် ပြုမူသည်ဟု ပြောဆိုလေ့ ရှိ ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်တွင် ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံအပေါ်တွင် အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းကင်းမဲ့သော အကြွင်းမဲ့ သစ္စာခံခြင်း၊ ဒေါသထုံမွန်းခြင်း၊ နှင့် အလွန်အမင်း မာန်မာနထောင်လွှားခြင်းတို့ မပါရှိပါဟု မိမိတို့ နားလည်သိရှိထား ပါသည်။
လူမဆန်သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနှင့် အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုများကို သတင်းများအဖြစ် နေ့စဉ်နှင့်အမျှနား နဲ့မ ဆန့်အောင် ကြားရပါသည်။ ကလေးသူငယ်များအပါအဝင် အပြစ်မဲ့ရွာသူရွာသားများမှာ ထိုင်း-ဗမာ နယ်စပ်တ လျှောက်နှင့် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် ဗမာစစ်တပ်နှင့်ဖြစ်ပွားသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရပါသည်။ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စုိုးဦးတို့မှာ လုံခြုံရေးတပ်များမှ ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးစားမိသည့်အတွက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတော်လျို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရကာ အမှုရင်ဆိုင်နေရလျက်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ခေါ်ယူရေး အစီအစဉ်များကို ကြားသိရသော်လည်း မိသားစုနှင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များဆုံးရှုံးကာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များ၏ လုံခြုံဘေးကင်းမှုအတွက်လည်းကောင်း၊ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေတွင်ရှိနေသော မြန်မာပြည်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုအတွက်လည်းကောင်း တိုး၍သာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
ဗမာတို့၏ဓလေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘဘိုးဘွားများကိုကျော်လွန်၍ အမျှော်အမြင်ဥာဏ်ပညာမသာလွန်နိုင် ဟူသော အယူအဆအစွဲအလမ်းတခုရှိပါသည်။ မိမိတို့အမြင်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့်အတွက် ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများ၏ သစ္စာဖောက်များအဖြစ် စွပ်စွဲမှုကို ခံခဲ့ရဖူးပါသည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြန်မာလူမျိုးများအပေါ် ကျောခိုင်းသည်ဟု ပြောဆိုခံခဲ့ရဖူးပါသည်။ မိမိတုို့ ယူဆချက်များကို ကာကွယ်ပြောဆိုပါကလည်း လမ်းလွဲလိုက်နေသည၊် အခြေအနေကို နားမလည်ဟု အဝေဖန်ခံရပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်ကြသောကြောင့် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်တေ့ာ၊ အနောက်နုိုင်ငံများ၏ မီဒီယာများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အယူအဆများ သွတ်သွင်းခံရသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရ၏ မူဝါဒများ နှင့် စစ်တပ်မှအတည်ပြုသော သတင်းပုံဖော်မှုများကို မထောက်ခံပါက ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နှုတ်ဆိတ်နေရုံသာရှိသည် ဟုလည်းကောင်း ပြောဆိုခြင်းခံရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒီမိုကရေစီ အယူအဆတုို့သည် အနောက်တိုင်း အတွေးအခေါ်များကို ကိုယ်စားပြုသည၊် မြန်မာတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိဟု စစ်တပ်မှ ယိုးစွပ်ဖူးပါသည်။ စစ်တပ်သည် အများလူပုံအလည်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာကို်ပူဇော်ဆည်းကပ်လျှက်ရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း ဘာသာတရားအပေါ်တွင် မည်သည့် စောင့်ထိန်းမှုမျှ မရှိကြောင်း ပေါ်လွင်စေခဲ့သည့် လုံခြုံရေးတပ်များမှ ရဟန်းသံဃာများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အချိန်အခါများ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ စစ်တပ်၏ ဝါဒဖြန့်ချီမှုများကို ပြည်သူလူထုမှ ပယ်ချကာ လူထုအားဖြင့် တွန်းလှန်ခဲ့ကြဖူးသည့် အချိန်အခါများလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒိုင်းသဖွယ် အသုံးချကာ အကာအကွယ်ယူထားနိုင်သောကြောင့် စစ်တပ်မှပြောကြားသမျှကို မေးခွန်းမထုတ်ဘဲ ယုံကြည်ရမည်ဟု တောင်းဆိုနေခြင်းမှာ သဘာဝမကျလှပါ။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး နှင့် အာဏာအချို့ တဝက် ရရှိစေရေး အတွက် လူအသက်ပေါင်းများစွာကို စတေးရမည် ဆိုပါက ထိုက်တန်မှုမရှိဟု ဆိုချင်ပါသည်။
​မိမိတို့ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် စာနာနားလည်စိတ်ရှိသူ အများအပြား ရှိ်သော်လည်း ၄င်းတို့မှာ အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုနှင့် မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကို ကြောက်ရွံ့ ၍ နှုတ်ဆိတ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် ဘုန်းတော်ကြီးတ်ပါး၏ အမုန်းစကားများကို ထောက်ခံခြင်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုဝင်များအပေါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်အကြမ်းဖက်ကျူးလွန့်ခြင်း စသည်တို့ကို မိမိကုိုယ်တိုင်ပြုမူခြင်းမရှိသော်လည်း ရိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်သည့် စိတ်ထားများ မိမိတို့စိတ်နှလုံးတွင် ကိန်းအောင်းတည်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အဖြစ် ခံယူပါက ခွဲခြားဆက်ဆံလိုမှုများ မိမိတို့၏တွင် ကိန်းအောင်းနေခြင်း ရှိမရှိ ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခံယူပါက မတရားမှုများကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ မည်သည့်လူမျိုး မည်သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေ ဒုက္ခရောက်နေသော သတ္တဝါတိုင်းကို ကြင်နာသနားစိတ်ဖြင့် ဆက်ဆံခြင်း စသည်တို့ကိုကျင့်သုံးရမည်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။ မုန်းတီးမှု ပါဝင်သော စကားများ၊ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာအား ကြောက်ရွံ့မှု စသည်များကို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ် သတ်မှတ်ကြမည်ကို မလိုလားပါ။ မည်သူတို့က မည်သို့ပင် အရှက်ရအောင် စွမ်းဆောင်နေသည်ဖြစ်ပါစေ မိမိတို့သည် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ ရှက်ရွံ့ နေမည် မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့မှာ ငယ်စဉ်က သင်ယူကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓ့မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များကိုသာအခြေခံ၍ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လမ်းညွှန်ချက်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားတန်ဖိုးထားရမည်ဟူသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့အပြားတွင် နေထိုင်ကြ၍ အောက်ပါလက်မှတ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည် တပ်မတော်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ လုံခြုံရေးတပ်များမှ ကျုးလွန်လျက်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်မှုများကို ရှုံ့ ချပါသည်။ လူမျိုးစုများ၏ မိမိကိုယ်ပိုင်အမည် သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ကို ထောက်ခံအားပေးပြီး ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင်၊ ကမန်၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ကရင်၊ ကယား လူမျိုးစုဝင်များအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအားလုံးကို ရှုံ့ ချပါသည်။ အသိအမှတ်ပြုမခံရသော မြန်မာပြည်သား တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂေါ်ရခါးများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုများကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘာသာရေးအပေါ်အခြေခံ၍ မြန်မာပြည်သား မွတ်စလင်များ၊ ခရစ်ယာန်များ၊ ဟိန္ဒူများ အပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုများ အာလုံးကို ဆန့်ကျင်ပြီး မည်သည့်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သည် ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူအားလုံး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ညီအကိုမောင်နှမ အားလုံးကို မိမိတုို့၏ လှုပ်ရှားမှုအား ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ မေတ္တာ (ချစ်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း) နှင့် သီလ (ကိုယ်ကျင့်တရား) တို့ အပေါ်တွင် ယုံကြည်ကြသော မြန်မာများအားလုံးကို စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြောင်းပြသရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ကြောက်ရွံ့ မှုကို မဖယ်ရှားနိုင်လျှင်သော်မှ သတ္တိကို မွေးမြူနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါလျက်. . . ။
Go to Original – docs.google.com
‹ Protected return to protected homeland
Razia’s statement delivered at the Security Council Open Debate on sexual violence in conflict ›
Tagged with: An Open Letter to Burmese Buddhists Concerning the Rohingya